ESRI Image Mapper, si loo daabaco khariidadaha - Geofumed
ESRI Image Mapper, si loo daabaco khariidadaha
Nofeembar, 2007 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah
Ka mid ah xalka ugu fiican ee ESRI u sii daayay Websaytka 2.0 waa HTML Image Mapper, iyada oo taageero laga helayo xitaa 9x iyo labadaba 3x.
Ka hor inta aynaan aragnay qaar ka mid ah qalabka ESRI, kuwaas oo aan waligood fiicneyn, gaar ahaan sababtoo ah waxay ku adkeysteen in ay ku hayaan qaababka ay WFS iyo WMS ku hayaan heerkooda.
Waxaa ka mid ah sifooyinka ugu fiican, waa taxanaha qoraaga, oo talaabo tallaabo tallaabo ah lagu qeexay asalka xogta, qaabka muuqaalka, kanaalada dibadda iyo gaar ahaan sifooyinka.
Aan aragno qaar ka mid ah shaqooyinka ay bixiyaan:
Dhaqan, Abuuritaanka daqiiqado
Looma baahna aqoonta loo yaqaan HTML code, inkastoo waxoogaa tweaks ah oo caawimaad CSS ah
Waxaa si toos ah looga dhoofin karaa mashruuca 3x
Uma baahna goobaha khiyaameeya serverka
Waxaa lagu daabici karaa maxaliga ama qashinka kaydka ... waxaana uu shaqeeyaa
Eye ... Taageerada ku jirta 3x iyadoo loo cusbooneysiiyay
Ugu dambeyntii khariidadaha wax soo saarka ahi waa mid aad u firfircoon, waxay keenaan cuntooyinkooda asaasiga ah ee barokaca, muujinta, raadinta iyo sifooyinka.
Si aad u wanaagsan ayaa loo sheegay in xayeysiiskaaga xayeysiinta: Fikradda iyo sifooyinka: Ka dhig mid fudud.
Bentley Systems ESRI GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous Khariidadaha Khariidada: waxay abuuraan khariidado, lacag ku kasbadaan
Post Next Miyaad raadineysaa qaybo ka mid ah AutoCAD?Next »